कष्टकर यात्राको रमाइलो अनुभूति
सरस्वती पाण्डे ‘सरस’/नेपाल मन्दिर नै मन्दिर भएको देशको रूपमा विश्वमा परिचित छ । धार्मिक तथा साँस्कृतिक ऐतिहासिकता नेपालको आफ्नै विशेषता हो । यस्तो देशमा जन्मिन पाएको आफैंलाई गर्व भएको अनुभूति हुन्छ । म सबैं धर्मलाई सम्मान गर्छु । तर, म हिन्दु हुँ । भगवानप्रति आस्था सबैको हुन्छ । सबै धर्मको सारतत्त्व भनेको मानवीयता, अहिंसा, शान्ति नै हो । धर्मले अनुशासन सिकाउँछ । झुक्न सिकाउँछ । नैतिकता सिकाउँछ । हो, त्यही भएर सबै धर्मप्रति मानिसुको लगाव महत्त्वपूर्ण भएको देख्छु ।
मैले दोलखा भीमसेन मन्दिरको दर्शन गर्ने सोच बनाएको थिएँ । पहिला एकपटक पनि गरेकै हो । फेरि दर्शन गर्न मन लाग्यो । जाने योजना बनाएँ । मन्दिरको आफ्नै इतिहास छ, धार्मिक महत्त्व छ, किम्वदन्ति छ त्यसैले मानिसहरू टाढा–टाढाबाट पनि जोखिम मोलेरै भए पनि दर्शन गर्न जान्छन् । त्रिभूज आकारको कालो शिला मूर्तिलाई भीमेश्वर, भीमसेन या भैरवको रूपमा पुजिन्छ । त्यसैले एक शिला तीन अबतार मानिएको छ । कसै कसैले यहि मूर्तिलाई नै देवी भगवतीको रूपमा पनि मानेको किम्बदन्ति रहेको छ । शिवको अर्को रूप भैरव, भीम पनि हो । त्यसैले महादेव पशुपतिको रूपमा रुद्री पूजा गरिन्छ भने, भीमसेन, भैरवको रूपमा वली पूजा समेत गरिन्छ । यस भीमेश्वर, भीमसेनमा साधारण पूजादेखि पञ्चवली र एकल पूजा (याकर पूजा) समेत गरिने परम्परागत चलन रहेछ । यो भीमेश्वर भीमसेनको मूर्ति कहिले कस्ले स्थापना गरेको हो एकिन गर्ने आधार प्रमाण भने भेटिएको छैन । वडा दशैमा पूजा संकल्प गर्दा किरात कालिन देखिका राजा महाराजाहरूको नाम लिने चलन छ । हाम्रो साँस्कृतिक धरोहर, धार्मिक आस्थाको प्रतीक, ऐतिहासिक, पर्यटकीय स्थल, प्रकृतिले कुनै कन्जुस्याईं नगरी आफ्नो सौन्दर्य ओछ्याएको ठाउँ दोलखा भीमसेन हो ।
दर्शन गर्न हामी कलंकीबाट बसपार्कतिर लाग्यौं । बर्खा यामको हिलो बाटो छिचोल्दै हामी बसपार्क पुग्यौं म, श्रीमान् र सानो छोरा । बसपार्क पुग्दा ढिलो भइसकेको थियो । चाहेको जस्तो बसको सीट पाउन सकिएन । त्यसैले अन्तिमको सिटमात्र खाली रहेछ । त्यही भए पनि चित्त बुझायौं । जानु त जसरी पनि छँदै छ । बच्चा बोकेर जानुपर्ने भएकाले अगाडि सीट मिलाइदिन आग्रह गर्दा छैन भनेपछि विहानाको साढे ९ बजेर गुड्ने पछाडिकै टिकट काटियो । केहि समयपछि हाम्रो यात्रा सुरु भयो । दोलखाको रमणीय दृश्यको कल्पनासहित बसबाट बाहिरको दृश्य हेर्दै, गफ गर्दै अगाडि बढ्यौँ । ४ वर्ष पहिले गइसकेको हुनाले थोरै भएपनि दोलखा जाने बाटो, मन्दिर वरिपरिको प्राकृतिक छटाको बारेमा मलाई थाहा थियो । पहिले साथीहरूसँग नयाँयात्रा र स्मरणीय पल संगाल्दै गएकी म यसपटक भने श्रीमान्को साथमा रमाउँदै यात्रा गरेकी थिएँ । हामी बसपार्कबाट थापाथली, बानेश्वर, कोटेश्वर, सांगा, वनेपा, धुलिखेल, पाँचखाल, जिरोकिलो, दोलालघाट, अंधेरी हुँदै काठमाडौँ कटेपछि गाडिको झ्यालबाट धुलो खाँदै यात्रा जारी रह्यो ।
बाहिरी दृश्यलाई नियाँल्दै गर्दा मलाई लाग्दै थियो– यो चार वर्षमा धेरै राम्रा परिवर्तन भएका होलान् । बाटो फराकिलो भएको होला । पिच भएको हो । सडक सफासुग्घर होला । तर त्यसको विपरीत झन बिग्रीएको र मर्मतसम्हार समेत नभएको देखें । यो देख्दा दुःख लाग्यो । हाम्रो विकासको अवस्थालाई मैले सम्झें । यस्तो गतिले कहिले विकास होला मुलुक ? जेहोस् चिन्ता सबैलाई छ । चिन्ता र सोच हनुसारको काम हुन नसकेको हो हाम्रो देशमा । यात्रा अगाडि बढिरहेको छ । मेरो श्रीमान् तीन वर्षपछि हाम्रो उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनबाट नेपाल फर्कनु लगत्तै दोलखाको यात्रामा निस्कनु भएको थियो । उहाँ हरेक ठाउँलाई चीनका विभिन्त्न ठाउँसँग तुलना गर्नुहुन्थ्यो । चीनमा यस्ता ठाउँलाई कस्तो राम्रो बनाएका छन् तर हाम्रो देशमा भएको प्राकृतिक तथा धार्मिक स्थलहरूलाई स्याहार,सम्भार गरिएको छैन । जताततै धुलोमौलोले छोपिएको छ । देश विकासको नारा लगाएर सत्तामा पुगेकाहरूले विकास त परै जाओस् सबैको लागि अपरिहार्य बाटोको समेत राम्रो व्यवस्था छैनन् भन्दै हुनुहुन्थ्यो । यात्रा जारी नै छ । देश विकास र चिन्ताले सताएको पनि छ ।
खाडिचौर नजिकैको एक होटलमा खाना खान बस रोक्यो । बसका स्टाफ र यात्रुसहित हामी पनि सँगै खाना खायौं । महङ्गो शुल्कको खाना खाएर फेरि खाडिचौरबाट सीधा रहेको अरनीको राजमार्ग छोडेर लामोसाँघु रामेछाम राजमार्गको बाटो समाउँदै दाँयातर्फ बढ्यौँ । त्यसपछि स्वाँरा, भालुखोप पछि थुमपाखरको उकालो लाग्यौँ । यात्रा रोमाञ्चक पनि लाग्दै छ । पहिलेको बाटोलाई फराकिलो बनाउँने बहानामा जथाभावी रूपमा बाटो भत्काएर बनाउने सुरसार नगरी लथालिंग छोडेको देख्दा प्रकृतीको सौन्दर्यलाई नै बाटोका खाल्डाखुल्डीले गिज्याएको जस्तो लाग्यो । मुडे पुग्यौँ । २०७२ वैशाख १२ गते गएको ‘गोरखा भूकम्प’ ले क्षति पु¥याएका घरहरू देखिए । भत्किएका घर, पानी चुहिएला जस्ता कटेजले भूकम्पले पारेको घाऊ देखियो । खाटो त मेटिदैन, घाऊ पुरिन कतिवर्ष लाग्छ थाहा छैन ।
उसैबीच मनमा आशाका किरणहरू पनि छरिए । मनमा हर्ष बढ्यो । त्यहाँको प्रशंसनीय आलु जताततै देखियो । मुडेको आलु भनेपछि मानिहरू राम्रो मानेर किन्छन् काठमाडौँतिर । स्वादिलो र छिटो पाक्ने भएकाले मानिसहरूले पनि रुचाउँछन् । यसले हाम्रो देश कृषि प्रधान हो भनेर सिन्धुपाल्चोकबासीले शाख जोगाएका छन् । कृषकलाई मैले मनमनै धन्यावाद स्वरूप गुच्छा अर्पन गरेँ । जिन्दगी यात्रा नै रहेछ । कतै यात्रा गर्दा मानिसहरू भन्छन् । जसरी यात्रामा रहँदा उकाली–ओराली पार गरिन्छ त्यसरी नै जिन्दगीका उकाली–ओराली पार हुँदै जान्छन् । तर, त्यो कहिले दुःखमा त कहिले सुखमा । त्यही भएर भन्नेले भनेका होलाज जिन्दगी यात्रा हो । गीतै छ–यात्रा रहेछ जिन्दगी ! हाम्रो यात्रा जारी छ । बसमा गीत बजिरहेको छ–प्रेमका । श्रीमान् र सानो छोरो साथैमा रहँदा सोच्छु–मेरो जीवन प्रेममय छ । आहाल डाँडा, खरिढुङ्गा, कालिन्चोक हुँदै दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकामा हाम्रो प्रवेश भयो । त्यसपछि चरिकोटमा पुगेर बसबाट ओर्लियौँ ।
दोलखा भिमसेनको दर्शन गर्न चरिकोटबाट स्थानीय सडकमा गुड्ने बस चढेर लामबगर हुँदै दोलखा मन्दिर नजिकको बसपार्कमा पुग्यौँ । पहिलोचोटि जाँदा म ४ घण्टा ३० मिनेटमा पुगेको थिएँ । यसपटक झण्डै ९ घण्टा लाग्यो । सत्तावालहरूले एक पटक सिन्धुपाल्चोक, दोलखा जिल्लावासीले दैनिक यात्रा गर्ने कष्टकर जीवनलाई हेरिदिने हो भने त्यहाँ बगेका पीडाका खोपिल्टाहरूमा छिट्टै मलम लाग्थ्यो कि ? हाम्रो यात्रा रमणीय भन्दा पनि जिल्लावासीका पीडा र विकासको नाममा बढी केन्द्रित भयो । साँझ परिसकेको हुनाले हामीले मन्दिर नजिकै रहेको दोलखा दर्शन होटलमा दिनभरीको यात्रामय थकाई मार्नका लागि होटलको कोठा बुक गर्यौँ ।भोलिपल्ट काठमाडौँ फर्किनु पर्ने भएको हुनाले हामी ४ बजे नै उठेर नुवाईधुवाई गरेर पाँच ५ बजे मन्दिर दर्शनको लागि गयौँ । बिहान मन्दिर खाली भएको हुनाले हामीले सजिलोसँग पूजाअर्चना ग¥यौ । फोटो खिच्यौं । ७ बजेको टिकट काटेर काठमाडौँ फर्कियौँ ।
बाटो उही हो । जाँदा सहज थिएन । आउँदा हुने कुरै भएन । असहज भयो । जुन उद्देश्य थियो मन्दिर दर्शनगर्नु त्यो उद्देश्य भने हाम्रो सहन रूपमा पूरा भयो । आउँदा पनि सुन्दर प्राकृतिक सौन्दर्य नियाल्दै सडका खोपिल्टामा गाडिको पाङ्ग्रासँगै आफूलाई पनि बजार्दै आउँदै थियौं खरिढुङ्गामा आएपछि गाडि फस्यो । सबै डरायौँ । गाडिभित्रकै एक पेसिन्जरले डोजर बोलाए र गाडिलाई फसेको ठाउँबाट बाहिर निकाल्न लगाए । यात्राको क्रममा गाडि फसेर धेरै यात्रुहरूले पाएको सास्तीलाई महसुस गर्दै हामीले मुडेमा आएर खाना खायौँ र भारी थकाईसँगै उही ९ घण्टामा काठमाडौँमा उत्रिएर आफ्नो बासस्थान तर्फ लाग्यौँ ।
अन्त्यमा, प्रकृतिले दिएको मनमोहक दृश्य र भीमसेन मन्दिरको दर्शनले दिएको खुसी बाहेक हामीले कुनै पनि सहजताको महसुस गर्न सकेनौँ । माथि उल्लेखित साझा समस्यालाई सरोकारवालाहरूले बेलैमा सोचेर विकास निर्माणका कार्यमा लागुन । योजनाविहिन राज्यको नीतिले गर्दा देश विकासमा हुन पुगेको छ । विकासमा ढिलासुस्तीले राज्यलाई कमजोर बनाएको छ । समयको महत्त्वलाई ध्यानमा राखेर अब आउने पर्यटक वर्षलाई सार्थक बनाउनको लागि योजना बनाएर र बनाएका योजना कार्यान्वय गर्न सके सबैको हित हुन्छ ।
प्रकाशित २0 भाद्र २0७५ , बुधबार | 2018-09-05 01:22:19